Magazine – Page4– MYATMINGALAR
သတင်းကောင်း – အဖွင့်မိတ်ဆက်
သတင်းကောင်းဆိုသည်မှာ ကျွနု်ပ်တို့အပြစ်အတွက် အသေခံ၍ သင်္ဂြိဟ်ခြင်းခံရပြီး သေခြင်းမှ ပြန်လည် ထမြောက်တော်မူသော ဘုရားသခင့် သားတော် သခင်ယေရှုခရစ်၏ ဘုန်းကြီးသော ဧဝံဂေလိ သတင်းတော်ပင် ဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည်
အချိန်၏အစနှင့် စကြာဝဠာ၏ဇစ်မြစ်အကြောင်းတွေးတောခြင်း ဘုရားသခင်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာခြောက်ပါး အစကနဦးအကြောင်းကို သင် စဉ်းစားဖူးပါသလား? သင် ဘယ်လိုဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါသလဲ? ပထမဦးဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာဘာမဆို။ ဒါမှမဟုတ် အချိန်အစောဆုံးကာလမှာ ဒီနေရာမှာ အရင်ဆုံးရှိခဲ့တဲ့အရာဘာမဆိုပေါ့။
ဘုရားသခင်ဟာ ဘယ်သူဖြစ်သလဲ? ဘုရားသခင်က ဘာနဲ့တူသလဲ? ဘုရားသခင်ရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာခြောက်ပါး ကြီးမားတဲ့အကျယ်အဝန်းပမာဏနဲ့ ဆန်းကျယ်တဲ့အနုစိတ်လက်ရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်တဲ့ ဒီစကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားသခင်ကို ကျနော်တို့သိနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားက သူ့အကြောင်းကိုပြောပြရုံမကပဲ တခြားအရာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ။
ဘုရားဆိုတာရှိသလား? ဘုရား အမှန်တကယ်ရှိတယ်ဆိုတာယုံကြည်ဖို့ ရှင်းလင်းတိကျသော အကြောင်းပြချက်များ (၆)ချက် ပြောပြပါမယ်။ မေရီလင်းအာဒမ်ဆင်ထံမှ ဘုရားရှိတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားကို တစ်ယောက်ယောက်က တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် သင့်ကိုပြတာမျိုး မလိုချင်ဘူးလား? အကျပ်ကိုင်တာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ခြမ်းအမှောင်ချထားတဲ့ နှလုံးသားများလေ ပြိုးပြက်ဝင်းလက်ထယ်ဝါ ရိုးတိုးရိပ်တိတ်ရှိလွန်းလှချည်ရဲ့ ….၊ ငါ့မှာသာ ခဏခဏလငပုပ်အဖမ်းခံရသလို နှလုံးသားတစ်စုံကို ဖုံးဖိသိမ်းဆည်းတိုက်ချွတ် ပွဲမထုတ်ရဲ ခန်းဆက်မများချင်လည်း ကြားဖြတ်ကြော်ငြာရှောင်တိမ်းတာနဲ့ အိပ်- မက်- များ